Mandehandeha Mahita Raha…(Allemagne) | Gasy ImpACT
Ny rafim-pianarana rahateo mamporisika ny ankizy hiteny fiteny vahiny maro. Indrindra fa ny ankizy mianatra ny resaka mahakasika ny Informatika sy Fandraharahana ary ny Fizahantany. Ary matetika efa apetraky ny fianarana fa misy “Semestre” iray ny ankizy tokony mandeha mianatra any ivelan’ny “Allemagne” – manao “Auslandssemester” no fiantson-dry zareo azy. Ka mandritra io vanim-potoana io ny ankizy sady mianatra no mifanena amin’ny kolotsaina hafa sy manatsara ny fahaizany ny fiteny avy amin’ilay firenena izay nosafidiany. Mazava ho azy fa volana maro miloha dia efa miomana ilay ankizy hiatrika io fotoana io ka efa samy mana-mafy ny fahaizany avy ny tsirairay.
G.I : Azonao faritana tsotsotra ve ny toetra mampiavaka an-dry zareo Alemanina?
Tahiry: Samy manana ny train-kefany ny olona tsirairay fa raha izaho manokana aloha dia afaka milaza fa olona tsotra, tsy manahirana ifandraisana ry zareo Alemanina. Marina fa tsy azo ampitoviana amin’ny toetratsika Malagasy izay tonga dia mifandray aman’olona avy hatrany ry zareo. Raha finamanana no resahana ohatra dia somary mangina sy mametraka elanelana am-boalohany ry zareo fa kosa olona azo hanankinam-po tsara aty aoriana. Ry zareo rahateo, olona mahitsy sy mivantana izay matetika rehefa miresaka na manao zavatra. Tsy miolakolaka sahala amintsika Malagasy 🙂
Ny resaka fanarahan-dalàna koa dia hita soritra amin’ny fiainan-dry zareo. Tsy miteny aho akory hoe olo-marina sy mpanara-dalàna daholo ny olona any satria sahala amin’ny olona rehetra dia misy foana ny manondrana fa kosa amin’ny ankapobeny dia hita sy tsapa hoe voataiza tao anatin’ny fanarahan-dalàna ry zareo ary matanjaka rahateo ny fampiarana ny lalàna any. Na olona goragora aza mety hiova haingana ihany satria mandany fotoana sy volabe raha sanatria ka voasazy.
Arakaraky ny “faritra” misy anao (satria “Etat Fédéral” i Allemagne) ny sazy ka ohatra amin’ny faritra iray: raha misy olona tratra miampita arabe amin’ny toerana tsy voatokana amin’izany dia mandoa sazy 40€ (120.000 Ar) na miampita lalam-by amin’ny faritra tsy voatondro amin’izany dia mandoa 25€ (70.000 Ar). Santionany ireo fa ny zavatra rehetra amin’ny ankapobeny dia voafaritry ny lalàna avokoa. Ary ny mpitandro ny filaminana tsy azonao hifandaminana fa ny mampiatra ny lalàna misy ihany no fantany. Ohatra mivaingana amin’ny resaka fampiharan-dalàna any ny nanjo ny filoham-pirenena teo aloha Christian Wulff izay voatery nametra-pialana tamin’ity taona ity.
Manarak’izay azo lazaina hoe olona tia miasa sy tsy miandriandry koa zareo – na lahy na vavy. Tsapa hoe kely koa ny elanalena eo amin’ny mpampiasa sy ny mpiasa ao amin’ny toeram-piasana. Hitako nandritra ny “Stage” izay nataoko ohatra fa ny lehibe dia tsy mihafahafa mirotsaka an-tsehatra: mibata entana, manadio birao raha ilaina izany, mandray anjara mivantana amin’ny asa raha repotra ny tsirairay fa tsy hoe mibaiko fotsiny. Marina fa tsy misy ny tonga lafatra satria samy olombelona daholo ihany amin’ny farany fa hitako hoe manana fanetretena ihany ry zareo amin’izay lafiny izay.
G.I : Afaka lazainao fohifohy ve ny zavatra tsara ho fantatra ho an’ny olona maniry te hanohy fianarana any Allemagne?
Tahiry: Araka ny voalazako teo aloha hoe arakaraky ny “Etat” ny lalàna sy ny toe-java-misy any “Allemagne”. Ka noho izany, tsy afaka hilaza aho hoe izao sy izao ny momba ny “Etat” tsirairay fa ny zavatra tsara fantatra amin’ny ankapobeny angamba dia hoe: raha misy olona maniry hanao fianarana ambony dia misy karazany roa amin’ny ankapobeny ny Oniversite. Ao ny antsoina hoe: “Universität” – izay raha tsotsorina dia mitovy saranga amin’ny eny Ambohitsaina (Ankatso) ary ny faharoa dia ny “Hochschule na Fachhochschule (FH)” izay Oniversite mifantoka kokoa amin’ny “fampiharana” avy hatrany fa tsy “fikarohana” be loatra. Izany hoe mitovy saranga amin’ireto “Instituts Supérieurs Professionnels” misy eto amintsika ireto. Ka arakaraka ny taranja tiana hianarana sy ny asa tiana atao any aoriana ny safidy.
Manaraka izay, misy fidirana roa ao anatin’ny taona iray: ny “Wintersemester” (manomboka volana Septembra) sy ny “Sommersemester” (manomboka volana Martsa) ka anjaran’ny tsirairay ny miomana sy mahita ny fotoana mahapety azy.
Mazava ho azy fa mila mahay fiteny Alemanina moa izany. Indrindra fa ho an’ny ankizy vao hiditra taona voalohany. Na izany ilay olona efa mahay miala aty Madagasikara dia manamafy kely sisa rehefa tonga any an-toerana na farafaharatsiny manana “niveau A2” izy miala eto dia manaraka “cours de langue” mandritra ny dimy na enimbolana eo rehefa tonga any. Ny tanjona moa izany dia mila manana DSH ilay olona (mitovy saranga amin’ny DALF Frantsay sy ny TOEFL Anglisy io ho an’ny fiteny Alemanina) mba ahafahany miditra amin’ny Oniversite.
Misy koa anefa ny Oniversite manome fahafahana ho an’ny olona mampiasa ny fiteny Anglisy fotsiny hiditra hanao MASTER avy hatrany. Ho an’ny olona efa manana “License” na “Maitrise” miampy trai-kefa arak’asa taona vitsy io matetika.
Samy manana ny sehatra misy azy moa ny tsirairay ka sarotra ny manome toro-hevitra feno. Ny azoko lazaina hanampiana an’izay voalaza izay angamba dia hoe aza misalasala mijery tranok’ala sy mifandray mivantana amin’ny toeram-pianarana izay mahaliana ny tsirairay. Misy koa ny sampandraharaha sahala amin’ny “Deutscher Akademischer Austausch Dienst“ na DAAD izay manome fanazavana feno momba ny fianarana any “Allemagne”. Ary mazava ho azy ny masoivoho Alemanina koa afaka manome fanampim-panazavana. Ny azoko lazaina mba hamporisihana ny olona angamba dia hoe amin’ny ankapobeny mangarahara tsara ny fikirakiran’ireo Oniversite ireo ny zavatra takiany ka manamora ny fanarahana ny “dossier”.
G.I : Misy hafatra kely farany ve tianao apetraka hamaranana azy?
Tahiry: Ny hafatra angamba dia hoe…mamporisika antsika rehetra – ny tanora indrindraindrindra – mba hisokatra bebe kokoa amin’ny kolotsaina hafa ankoatry izay efa fantatra satria betsaka ny fahalalana na fomba fijery na fomba fiaina hafa izay afaka hanova ny fiainantsika kanefa tsy fantatra na tsy voatrandraka hatreto. Amin’izao fotoana izao efa betsaka ny fomba sy fitaovana ahafahana manita-pahalalana fa matetika marina aloha dia ny tsy fahafehezana fiteny vahiny no sakana tsy ahafahana manao an’izany.
Ary farany indrindra, mikasika ny olona izay maniry ny hanohy fianarana any am-pita. Tiako tsindriana manokana mihitsy ny hoe mila mitandrina isika amin’’ilay “concept” hoe “Andafy – Andafy” ity fa tena fandrika be. Ny tiako lazaina dia matetika be isika Malagasy raha vao miresaka hoe “Andafy” dia “Paradisa” no tonga ao an-tsaina. Ny zava-misy anefa dia n’aiza n’aiza aleha dia misy foana ny olana sy zavatra hafa maro tsy maintsy sedraina. Ny endriny sy ny fisehony no miova fa ny “problema” dia “problema” foana. Ilana fiomanana ara-bola, ara-tsaina, ara-batana sy ara-panahy ilay fivoahana mankany ivelany. Matetika zavatra mahafinaritra foana no faheno na tiana ho tazomina ao an-tsaina fa tsy vitsy mihitsy ny olona sahirana sy mitolona miady amin’ny fiainana any am-pita any (na tompon-tany na vahiny), misy koa ny mpianatra izay tsy mahavita ny fianarana araka ny tokony ho izy nohon’ny olana samihafa izay fahita any amin’ny tany mandroso. Matetika anefa dia tsy misy indrafo ny rafi-piaraha-monina any. Ka mila fiomanana sy fandinihana ny fikasana sahala amin’izany. Izay angamba dia…mirary soa antsika rehetra.
G.I : Misaotra betsaka an’i Tahiry nifampizara dia tongavasoa ho amin’ny tanjona iriana. Ary mirary fahombiazana ho antsika rehetra ihany koa.
Cette entrée a été publiée le samedi 29 septembre 2012 à 9:45 et taguée "Gasy impact", Alemanina, Allemagne, Andafy, Blogy Gasy, Fianarana Ambony, Fianarana any ampita, Fomba Fiaina, Fomba Fijery, Fomba Fisainana, Hanohy Fianarana, Hianatra any Allemagne, malagasy mandroso, Malagasy mivoatra, Mandehandeha Mahita Raha, Mpianatra Malagasy et publié dans Education, Lahatsoratra Malagasy, Uncategorized.	Vous pouvez suivre les commentaires liés à cette entrée par flux RSS 2.0.
" Madagascar Bilingue Forever : un frein au développement !
Fédéralisme ou Etat Unitaire: diviser pour mieux régner ? »